Mpamatsy mpanamboatra fehikibo vita amin'ny fehikibo vita amin'ny fehikibo | YiZheng
ny Milina fehikibo fehikibo azo ampiasaina hitaterana ireo akora lehibe sy vita vita. Azo iaraha-miasa amin'ny fizotry ny famokarana indostrialy isan-karazany izy io, ary mamorona tsipika famokarana gadona.
Ampiasaina ny masinina Rubber Conveyor?
ny Milina fehikibo fehikibo dia ampiasaina amin'ny famonosana, famoahana ary famoahana ny entana ao amin'ny wharf sy trano fanatobiana entana. Izy io dia manana tombony amin'ny firafitra matevina, fandidiana tsotra, hetsika mety, fisehoana tsara tarehy.
Milina fehikibo fehikibo mety koa amin'ny famokarana zezika sy fitaterana. Izy io dia masinina misy fikorontanana izay mandefa fitaovana tsy tapaka. Izy io dia ahitana rakotra, conveyor belt, roller, fitaovana fihenjanana ary fitaovana fampitana.
Fitsipika momba ny asany ny milina mpanamboatra fehikibo
Ny dingan'ny famindrana ara-pitaovana dia miforona eo anelanelan'ny teboka famahanana voalohany sy ny teboka famoahana farany amin'ny tsipika fampitana iray. Tsy vitan'ny fanatanterahana ny fitaterana ireo fitaovana miparitaka fotsiny fa koa ny fitaterana ny entana vita. Ankoatry ny fitaterana ara-pitaovana tsotra dia afaka miara-miasa amin'ny fepetra takian'ny fizotran'ny teknolojia isan-karazany amin'ny orinasa indostrialy ihany koa izy io mba hamoronana tsipika fitaterana fikorianan'ny rhythmical.
Endri-javatra amin'ny milina fampidinana fehikibo
1. Mandroso sy tsotra amin'ny firafiny, mora tazonina.
2. Fahaiza-mamindra avo sy halaviran'ny famindrana lava.
3. Ampiasaina amin'ny indostrian'ny harena ankibon'ny tany, ny metallurgical ary ny arina arintany mba hamindrana ireo fasika sy vongana, na fonosana fonosana.
4. Izy io dia singa iray tena ilaina amin'ny milina tsy manara-penitra amin'ny toe-javatra manokana.
5. Azo namboarina.
Fampisehoana horonantsary vita amin'ny fehikibo vita amin'ny fehikibo
Safidy maodely mifehy ny fehikibo vita amin'ny fehikibo
Fehin'ny fehikibo （mm)
Ny halavan'ny fehikibo （m) / Hery （kw)
Hafainganam-pandeha （m / s)
Fahafahana （t / h)
F6 / 4
Teo aloha: Screener amin'ny varotra Linear
Manaraka: Mpanatitra fehikibo finday azo entina
Fampidirana Inona no atao hoe Granulator Disc / Pan Organic & Compound Fertilizer? Ity andiana kapila granulate ity dia miaraka am-bava telo manalefaka, manamora ny famokarana tsy tapaka, mampihena be ny hamafin'ny asa sy manatsara ny fahombiazan'ny asa. Ny reducer sy ny motera dia mampiasa fehin-kibo miovaova mba hanombohana tsara, hampiadana ny fiantraikan'ny ...
Zezika biolojika sy zezika karazana vaovao ...
Fampidirana Inona ny masinina Granulator Zezika Organika & Compound Vaovao? Ny milina vaovao Organic & Compound Fertilizer Granulator Machine dia mampiasa ny hery aerodynamic novokarin'ny hery manetsiketsika mekanika haingam-pandeha ao anaty varingarina mba hampifangaroana, hamoahana, hamoahana, ...
Fampidirana Inona no masinina mixeur zezika roa? Double Shaft Fertilizer Mixer Machine dia fitaovana fampifangaroana mahomby, arakaraka ny faharetan'ny tanky lehibe, dia vao mainka tsara ny vokatra mifangaro. Ny akora fototra sy ny fitaovana fanampiny fanampiny dia ampidirina ao anaty fitaovana miaraka amin'izay ary afangaro amin'ny fanamiana, ary avy eo entin'ny b ...
Fampidirana Inona ny masinina manosotra Rotary Granular? Organizer & Compound Granular Fertilizer Rotary Coating Machine Coating machine dia namboarina manokana tamin'ny rafitra anatiny mifanaraka amin'ny fepetra takiana. Izy io dia fitaovana manisy zezika manokana zezika. Ny fampiasana teknolojia fanosotra dia mety mahomby ...
Fampidirana Crawler Type Organic Waste Composting Turner Machine Overview Crawler Type Organic Waste Composting Turner Machine dia ao amin'ny mode fermentation puile ground, izay fomba mavesatra indrindra amin'ny fitsitsiana ny tany sy ny loharanon'olombelona ankehitriny. Ny antontan-taratasy dia mila apetaka ao anaty stack, avy eo ahetsiketsika ny fitaovana ary cr ...